खिचरा महोत्सवको आज दोस्रो दिनः चर्चित गायक अर्जुन कौशलको प्रस्तुती – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
चितवन, पुस २८/पूर्वीचितवनको खैरहनीमा जारी ‘सातौं खिचरा महोत्सव–२०७६’ अन्तरगत आज दोस्रो दिन विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदैछ ।
महोत्सवमा आज (सोमबार) साँस्कृतिक कार्यक्रम अन्तरगत चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने छ । आज चर्चित गायक अर्जुन कौशलको सांगीतिक प्रस्तुती रहने साँस्कृतिक समितिका संयोजक जयस चौधरीले जानकारी दिए ।
महोत्सवमा कौशलको प्रस्तुतीसंगै अन्य स्थानीय कलाकारहरुको समेत प्रस्तुती रहने आयोजक थारु कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नं.७ ले जनाएको छ । यस्तै महोत्सव अन्तरगत आयोजित ‘खिचरा डान्स आइडल’ को प्रस्तुती समेत रहने छ । पहिलो चरणबाट छनौट भएका २० जना प्रतियोगीहरुको आज प्रस्तुती रहने आइडलका संयोजक हरिशरण चौधरीले जानकारी दिए ।
हिजो (आइतबार) देखि सुरु भएको खिचरा महोत्सव माघ ८ गतेसम्म गौचरनमा चल्ने छ । महोत्सवको हिजो उपप्रधान मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले समुद्घाटन गरेका थिए ।
महोत्सवमा थारुसंगै विभिन्न जातजातिको परम्परागत भेषभुषा सहितको साँस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुतीका साथै मिस नेपालद्धारा थारु भेषभुषासहितको पहिरनमा मेला अवलोकन, मिस्टर एण्ड मिस थारुको फेसन शो र खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता राखिएको जानकारी दिए ।
यस्तै महोत्सवमा प्रतियोगितात्मक कृषि उपज प्रदर्शनी, अन्तर विद्यालयस्तरीय चित्रकला, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, ४० वर्ष माथिका पुरुषको भेट्रान दौड, स्लो साइकल रेस, खिचरा फोटोरसेल्फी फोटो प्रतियोगिता र फेस पेन्ट प्रतियोगिता रहने आयोजकले जनाएको छ । यसवर्ष पनि महोत्सवमा प्रवेशका लागि विगतका वर्ष जस्तै ५० रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चितवनका थारु समुदायले माघ १ गते खिचरा पर्व मनाउने गरेका छन् । यही अवसरमा विगत सात वर्षदेखि महोत्सव आयोजना हुँदै आइरहेको छ ।
सभामुख पदको संघर्षमा प्रचण्डलाई घुँडा टेकाउँदै प्रधानमन्त्री ओली !
करोडौं राजस्व ठगी गर्ने श्रुति ट्रेडर्स विरुद्ध मुद्धा
नक्कली जग्गाधनी खडागरी ३२ बिगाह जग्गा हिनामिना गर्ने सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
अवैध मिर्गौला प्रत्यारोपणस् चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
युवा अभियान्ता सरोजको नेतृत्वमा ६० दिने अभियान: सहिद स्मृती बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ तथा बृक्षारोपण २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
गृहजिल्ला चितवनबाट प्रचण्डले भने : हामीले मिलेर नयाँ नक्सा बनाएको हो, कोही दलाल‍ र कोही महान् राष्ट्रवादी होइन! २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
मृगौला किनबेचको अबैध धन्दामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल : प्रहरीले गर्यो डाक्टर र जनप्रतिनिधिसहित १२ जनाको नाम सार्वजनिक ! २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
गृह जिल्लामा ब्यस्त प्रचण्ड आज दिनभर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा । २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
मृगौला प्रत्यारोपणमा कुनैअवैधानिक र गैरकानुनी काम नगरेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको दाबी । २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
बाढीपहिरोबाट मर्नेको सख्ँया ८८, ३२ बेपत्ता २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५
श्रावण र भाद्र दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’ २८ पुस २०७६, सोमबार ०८:३५